ရိုက်တာသတင်းဌာနတွင်ဖော်ပြခဲ့သော ရခိုင်ပြည်နယ်ဆိုင်ရာဆောင်းပါးများအတွင်းမှ လက်တွေ့ နှင့်ကင်းကွာလွန်းနေသောအချက်အလက်များ
ရိုက်တာသတင်းဌာနမှ သတင်း ထောက်များနှင့် လူ့အခွင့်အရေးချန်ပီယံ ဟု သတ်မှတ်နေကြသော အဖွဲ့အစည်း များမှာမူ အစွန်းရောက်အစ္စလာမ္မစ်စိတ် ဓာတ်ရှိသော ဘင်္ဂါလီမွတ်စလင်များ အပေါ် အပေါင်းလက္ခဏာဆောင်သည့် သဘောထားမျိုး ထားရှိနေခြင်းဖြစ်ဖွယ် ရှိသည်။ သို့သော် အသွင်မတူသူများနှင့် အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်မဟုတ်သူများအား သတ်ဖြတ်ခြင်းပြုလုပ်သည်အထိ ရှင်း လင်းရန် ရည်ရွယ်ချက်ရှိနေသူများအပေါ် နှစ်ခြိုက်မှုမရှိခြင်းမှာ မှားယွင်းမှုတစ်ခု မဟုတ်ဟု ဆိုရမည်သာဖြစ်သည်။
ထို့အပြင် ''အရာအားလုံးကို ကျွန်ုပ် တို့ ဖျက်ဆီးမည်''ဟု အမည်ပေးထား သောခေါင်းစဉ်အောက်တွင်လည်း ရိုဟင် ဂျာများအား မျိုးနွယ်စုရှင်းလင်းသည့် အသွင်ဖြင့်ဆောင်ရွက်ခဲ့ရာ၌ မြန်မာ့လုံခြုံ ရေးအဖွဲ့ဝင်များသည် စနစ်တကျပြင်ဆင် မှုပြုလုပ်ကာ ထောင်နှင့်ချီသောရိုဟင်ဂျာ များကို သတ်ဖြတ်ခဲ့ကြကြောင်း၊ သတ် ဖြတ်ခံရသူများထဲတွင် အသက်ငယ်ရွယ် သော ကလေးငယ်များလည်း ပါဝင်ခဲ့ ကြောင်းရေးသားခဲ့ကြသည်။ လူ့အခွင့် အရေးအဖွဲ့များကလည်း တပ်မတော် သည် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးလွန်မှုများပြု လုပ်ခဲ့သည့်အပြင် ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှု များပြုလုပ်ကာ နေရပ်စွန့်ခွာထွက်ပြေး စေရန် ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း၊ ဈေးများနှင့် စိုက်ခင်းများကိုမီးရှို့ကာ ဒေသခံများ နေရပ်စွန့်ခွာထွက်ပြေးစေရန်ဆောင်ရွက် ခဲ့ကြောင်း စွပ်စွဲခဲ့ကြကြောင်း ၊Am- nesty International ၏လေ့လာမှုအရ လုံခြုံရေးအဖွဲ့ဝင်များကျူးလွန်ခဲ့သည့် ရာဇဝတ်မှုများသည် နိုင်ငံတကာဥပဒေ များနှင့်ဆုံးဖြတ်ပါက လူသားစံနှုန်းများ ကို ဆန့်ကျင်နေသည့်ရာဇဝတ်မှုများဖြစ် ကြောင်း၊ ရိုဟင်ဂျာများကို စနစ်တကျ ပြင်ဆင်ထားသော ကြီးမားကျယ်ပြန့်သည့် တိုက်ခိုက်မှုများပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဟု တွေ့ရှိခဲ့ကြောင်းလည်း ရိုက်တာကရေး သားဖော်ပြသွားခဲ့သည်။သို့သော် စဉ်းစား ရမည့်အချက်တစ်ခုမှာ Am- nesty International က မြန်မာ့တပ်မတော်သည် သြဂုတ် ၂၅ ရက်တွင် အကြမ်းဖက်တိုက် ခိုက်မှုများ စတင်ဖြစ်ပွားပြီးမှသာလျှင် နယ်မြေရှင်းလင်းရေးနှင့် စစ်ဆင်ရေးများ ကို အရှိန်မြှင့်တင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြောင်း အား သက်သေပြနိုင်သည်ဟု ဝန်ခံထား ခြင်းဖြစ်သည်။ မြန်မာအစိုးရဘက်က လည်း ARSA အဖွဲ့၏ တိုက်ခိုက်မှုများကို ထိန်းချုပ်တုံ့ပြန်ရန်ရည်ရွယ်ပြီး နယ်မြေ ရှင်းလင်းရေးနှင့် တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေး လုပ်ငန်းစဉ်များကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်းဖြစ် ကြောင်း တရားဝင်သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ သည်။
Amnesty International က မြန်မာ့တပ်မတော်မှအဆင့်မြင့်အရာရှိ ၁၃ ဦးအား ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သော ဖြစ်စဉ်များနှင့်ပတ်သက်၍ အပြစ်ရှိသူ များဖြစ်ကြောင်း စွပ်စွဲခဲ့ကာ နိုင်ငံတကာ ရာဇဝတ်မှုခုံရုံးသို့ တင်ပို့စစ်ဆေးရန် တိုက် တွန်းခဲ့သည်။ အပြစ်ရှိသည်ဟု စွပ်စွဲခဲ့ သူများထဲ၌ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်၊ မြန်မာ့တပ်မတော်က ရာထူး မှထုတ်ပယ်ခဲ့သော တိုင်းမှူးဟောင်း ဗိုလ်ချုပ်မောင်မောင်စိုးတို့ ပါဝင်ခဲ့သည်။ ထို့အပြင် ရာထူးငယ်သည့်အရာရှိတချို့ နှင့် တပ်ဖွဲ့ဝင်တချို့ကိုလည်း ရာဇဝတ်မှု ကျူးလွန်သူများစာရင်းတွင် ထည့်သွင်း ထားခဲ့သည်။
နိုင်ငံတကာရာဇဝတ်မှုခုံရုံးသို့ အမှန် တကယ်တင်ပို့ရမည့်သူမှာARSA အဖွဲ့ ခေါင်းဆောင် အေတာယူလက်ခ်ျဖြစ် သည်။ ထို့အပြင် ARSA အဖွဲ့ဝင်များ၊ အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုများပြုလုပ်ရာ တွင် ပါဝင်ခဲ့သူများကိုလည်း နိုင်ငံတကာ ရာဇဝတ်မှုခုံရုံးသို့တင်ပို့ကာ ၄င်းတို့ကျူး လွန်ခဲ့သည့် ပြစ်မှုများအတွက် စစ်ဆေး မှုများပြုလုပ်ရန် လိုအပ်မည်ဖြစ်သည်။
၄င်းတို့အားလုံးသည် တစ်ဦးချင်း သတ်ဖြတ်မှု၊ အစုလိုက်အပြုံလိုက်သတ် ဖြတ်မှု၊ အစုလိုက်အပြုံလိုက်သတ်ဖြတ်ရန် ကြံစည်မှု၊ လူမျိုးစုရှင်းလင်းရေးပြုလုပ် ရန် ကြိုးပမ်းမှု၊ မျိုးသုဉ်းသတ်ဖြတ်မှု ကျူးလွန်ရန် ကြိုးပမ်းမှုများအပါအဝင် အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုများ ကျူးလွန် ခဲ့ကြသည်။
ထို့အပြင် ARSA အဖွဲ့အား ထောက်ခံအားပေးသည်ဟုဆိုရမည့် For-tify Rights၊ မက်သရူးစမစ်၊ ဖီးလ်ရော် ဘတ်ဆန်၊ ကန်နက်ရို့စ်၊ ဆိုင်မွန်လူးဝစ် နှင့် ရိုက်တာသတင်းဌာနအပါအဝင် အခြား သူများနှင့် အခြားအဖွဲ့အစည်းများကို စစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်သင့်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံသည် ရောမသဘော တူညီချက်တွင် ပါဝင်လက်မှတ်ရေးထိုး ထားခြင်းမရှိသောကြောင့် နိုင်ငံတကာ ရာဇဝတ်မှုခုံရုံး၏ သြဇာသက်ရောက်မှု ရှိမည် မဟုတ်ပေ။ ရခိုင်ပြည်နယ်အရေး နှင့်ပတ်သက်၍ မြန်မာနိုင်ငံအားအရေးယူ လိုသည်ဆိုပါက ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေး ကောင်စီ အမြဲတမ်းအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံအားလုံး သဘောတူညီရန်လိုအပ်မည်ဖြစ်သည်။ သို့သော် အမြဲတမ်းအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ ဖြစ်သည့် တရုတ်က ရခိုင်ပြည်နယ်အရေး နှင့်ဆိုင်သည့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ဆောင်ရွက် ချက်များကို ထောက်ခံကာကူညီလျက် ရှိသည်။ ထို့ကြောင့် မြန်မာ့တပ်မတော် အား အရေးယူရန်ကြိုးပမ်းမှုများမှာ အရာ ထင်လာဖွယ်မရှိပေ။
မြန်မာနိုင်ငံသည် (Ref; Reuters Articles Are Fake News Of The Worst Degree! Reuters Needs To Be Put On Trial For 'Crimes Against Humanity By Rick Heizman) Amnesty International ၏ အစီရင်ခံစာအတွင်း၌ပါဝင် သော ရေးသားဖော်ပြချက်များကို တုံ့ပြန် ဖြေရှင်းခြင်းမရှိသော်လည်း အကြမ်းဖက် တိုက်ခိုက်မှုဖြစ်ပွားနိုင်သည့် ခြိမ်းခြောက် မှုများကို ကိုင်တွယ်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် သတိထား၍ပြင်ဆင်နေကြောင်း တွေ့ရ မည်ဖြစ်သည်။ တပ်မတော်ကလည်း လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို ကျော်လွန်လုပ် ဆောင်ခဲ့သူများအား စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများ ပြုလုပ်ကာ အရေးယူအပြစ်ပေးခဲ့သည်။ ၂ဝ၁၇ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလကပြုလုပ်ခဲ့ သော စစ်ဆေးမှုများအရ လုပ်ထုံးလုပ် နည်းကို ကျော်လွန်လုပ်ဆောင်ခဲ့သည့် တပ်ဖွဲ့ဝင်များကို တပ်မတော်ကအရေးယူ အပြစ်ပေးခဲ့သည်။
(Ref; Reuters Articles Are Fake News Of The Worst Degree! Reuters Needs To Be Put On Trial For 'Crimes Against Humanity By Rick Heizman)